Foosto wareejin / mashiinka loogu talagalay kululeynta baaldiyada ka hor inta aan la kulmin
Bogga ugu weyn / Cadaadin foosto / Foornada Foornada foojarka
Cadaadiska Nalalka Dabaysha
Categories: Cadaadiska Nalalka Dabaysha, Cadaadin foosto Tags: foornada aluminiinka, wargeyska foornada lagu iibiyo, iibso qalab induction ah, foornada korontada ku shaqaysa, baaldi-soo-saarku wuxuu dhalaalayaa foornada, miraayad baalal ah oo indho-fur ah, induction induction, biilasha wax lagu iibiyo, induction indoon madow, indho-indheynta induction, foornada wax lagu dhejiyo, qaboojiyaha qalajinta, induction induction wareejinta kuleylka, sicirka iibinta induction, kuleylka kuleylka
Foosto wareejin ah oo loogu talagalay kuleylka kululeeyaha / aluminium / birta birta ah ka hor inta aan la sameynin kulul
Kuleylinta waxyaabaha kala duwan ee baararka: sida birta & birta, naxaasta, naxaasta, aluminium-ka, iwm.
Sawir kaliya oo loogu talagalay tixraaca, midabka ayaa la beddeli karaa awooda kala duwan.
Hawlaha iyo qeexitaannada gaarka ah ee loogu talagalay shuruudaha macaamiisha.
Noocyada iyo Faa'iidooyinka:
1.Automatic: Quudinta otomaatiga ah, xulashada otomaatiga ah ee qaybta shaqada waa wanaagsan ama xun, cabirka otomaatiga ah ee heerkulka, dheecaanka otomaatiga ah.
2. Naqshad isku dhafan: Badbaadi waqtiga rakibida, qiimaha iyo booska.
3. Gudiga hawlgalku wuxuu kujiraa bandhigyada dawladaha ka shaqeeya mashiinka, si loo fududeeyo cilad bixinta.
1 Kuleylka degdega ah oo deggan keydinta 20% - 30% tamarta korontada sida caadiga ah;
Waxtarka sarreeya iyo isticmaalka tamarta yar
2 Cabbir yar oo yar Si fudud loo rakibo, u shaqeeyo loona dayactiro
3 Amaan ah oo lagu kalsoonaan karo Wax xoog ah ma jiro, oo aad ugu kalsoon tahay shaqaalahaaga.
4 Nidaam wareega wareega Awood u leh inuu si joogto ah u shaqeeyo 24 saac
5 dhamaystiraan is-difaacid
function Noocyo badan oo nalalka digniinta:
dheeraadka ah, korodhka xoogga leh, kulaylka, biyo yaraanta iwm. Lambarradani way xakameyn karaan oo difaaci karaan mishiinka.
6 Ilaalinta deegaanka Ku dhowaad lakab kale oo oxide ah,
ma jirin wax daal ah, biyo qashin ah
7 Nooca IGBT Iska ilaali joojinta shabakad aan xiriir la lahayn;
Xaqiiji dhererka mashiinka.
In foornada wax lagu dhejiyo ee kuleylka oo dhan ama boombalaha ayaa kulaalaya. Caadi ahaan bikitaalada gaaban ama lakabyo hammuun ama baaqul ayaa loo isticmaalaa in si toos ah loo soo bandhigo baaldiyada si ay u xajiyaan silsiladaha, silsiladaha cagaha lagu riixo ama mararka qaarkood feeraha pneumatic. Biilashka ayaa markaa lagu riixaa koollada ka dambaysa midka kale ee dusha biyaha la qaboojiyey ama dhejiyeyaasha dhoobada waxaa loo isticmaalaa iyada oo loo marayo xuddunta xaglaha taasoo hoos u dhigaysa jahwareerka iyo ka hortagga xirashada. Dhererka koolladu waa hawl ka mid ah wakhtiga qoyan ee loo baahan yahay, wakhtiga wareegga ee qayb kasta iyo dhererka baaldiga. Mugga sare ee qaybta weyn ee shaqada wuxuu u shaqeynayaa ma aha wax aan caadi ahayn in 4 ama 5 ay xirxiraan taxane ah si loo siiyo 5 m (16 ft) ee isku xiran ama ka badan.
Foostada kuleylka kuleylka leh ee soo kordho
Metals Billet Foosto kulul
Iskudhafka Semi-Automatic ee Qumanka Nidaamka Dheeriga ah